အဘယ်အရာကိုသူမသည် Mood အတွက်အမြဲတမ်းရှိခဲ့ပါလျှင်? (2010) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အဆိုပါ Coolidge Effect Trump ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်များနိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က ဂျာမန်သုတေသီတွေကသတင်းပို့ မိတ်ဖက်ပြုမှုကြာချိန်များလာသည်နှင့်အမျှလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများတွင်ကျဆင်းလာသည်။ များသောအားဖြင့် (ကျား / မမရွေး) စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသူလိုချင်သလောက်လိင်ဆက်ဆံမှသာလျှင်သူသည်လုံးဝပျော်ရွှင်လိမ့်မည်ဟုယူဆသည်။ အဘယ်အရာကိုသူမ၏စိတ်ဓါတ်များအတွက်ရမလဲ
တကယ်တော့အခြေအနေကထက်နည်းနည်း trickier ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဖက်ကိုမကြာခဏဝတ္ထုမိတ်ဖက်ဖို့လိင်နှင့်ပင် မှစ. ထပ်တူပြုခြင်းထဲကသူတို့ကိုတွန်းသောမဟုတ်ဘဲအကုန်လုံးမသိစိတ်တစ်ပိုင်းမျိုးရိုးဗီဇအစီအစဉ်စစ်ချီတကယ်ရှိပါတယ်။
အထီးမျောက် (က, ခံစားချက်အတွက်အစဉ်အမြဲနေ့စဉ်ဟော်မုန်းထိုးဆေးကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့ကြသူ) တူညီတဲ့အမျိုးသမီးနှင့်အတူအကြိမ်ကြိမ်တွဲခဲ့ကြသည့်အခါဖြစ်ပျက်စဉ်းစားပါ။ ညာဘက်မျောက်ကောင်းကင်? Nope ။ ယောက်ျား ဒီထက်နည်းမကြာခဏ copulatedနှင့်သုံး-and တစ်နှစ်ခွဲနှစ်ကာလအတွင်း, စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့နည်းလာအတူ။ ဝတ္ထုအမျိုးသမီးတက်ပြသသည့်အခါဤပေါ့လျော့သူများပျာကသီဟာသူတို့ရဲ့မူလ zest နှင့်အတူအရေးယူသို့လှိမ့်မသာ, သော။
သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဟာခံစားချက်အတွက်အစဉ်အမြဲဖြစ်လျှင်ဒီတော့ဖြစ်ပျက်မလဲ အခွင့်အလမ်းတွေကိုမကြာမီသင်သည်ထိုကောင်းသောများမှာ အလိုမရှိ အနည်းဆုံးသူ / သူမနှင့်အတူရှိပါ။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကသင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကမင်းလိုချင်တဲ့အတိုင်းမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံမှုမပြုခဲ့ဘူးဆိုရင်သူဟာမင်းရဲ့လိင်စိတ်ကိုမကြာခဏလိင်စိတ်မထားမိအောင်တားဆီးခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့သမဂ္ဂကိုထိန်းသိမ်းနိုင်လိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤသည်မှာမသင့်တော်သောအခြေအနေမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာမကြာခဏချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုမရရှိပါက၊ စုံတွဲများအကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင်ကြိုးများသည်အားနည်းသွားပြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်စုံတွဲများသည်သတိချစ်ခင်တွယ်တာမှု၌ပါ ၀ င်လာကြသည်။ သာ အော်ဂဇင်လိုက်စားသည့်အခါ။
လိင်ဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုသည်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုမည်သို့ကွာခြားစေနိုင်သနည်း။ ကြွက်များ၏ ဦး နှောက်ကိုသိပ္ပံပညာရှင်များကလေ့လာသောအခါ၊ ကြွက်များ၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၏နောက်ကွယ်တွင် dopamine (“ I have it have!” ပစ္စည်း) ဟုခေါ်သည့်အာရုံကြောဓာတုဗေဒပညာရှင်များကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကြွက်တစ်ကောင်သည်မိတ်ဖက်တစ် ဦး တည်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကူးစက်သွားသည်နှင့်အမျှ၎င်း ဦး နှောက်၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောတိုက်နယ်တွင် dopamine နည်းပါးလာသည်။
အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်အသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါ dopamine သည်နောက်တစ်ဖန်ထပ်မံမြင့်တက်လာသည်။ သငျသညျခံစားချက်ထဲမှာချက်ချင်းဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျကြက်ဆင်နှင့်အာလူးအပြည့်နှင့်ပြည့်နှက်နေသည့်တိုင်၎င်းသည်သကြားဓာတ်၊ အဆီပြည့်ဝသည့်အချိုပွဲတစ်ခုအားသင့်အား“ ဟုတ်တယ်” ဟုပြောစေသည်။ သင်၏အကျိုးကျေးဇူးများသောတိုက်နယ်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာသည့်ဒေါင်မင်သည်သင်၏ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာ ဦး နှောက်သည်အလွန်အကျွံစားခြင်းသို့မဟုတ်ဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ထင်မြင်စေကာမူ၊ dopamine အလွန်များပြားခြင်းသည်“ ဟုတ်ကဲ့!” ဖြစ်သည်။ dopamine နိမ့်ကျနေစဉ် "သိပ်မများပါဘူး။ " နောက်ပို့စ်တစ်ခုမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း dopamine ဟာသဘာဝကနေအော်ဂဇင်ပြီးနောက်မှာလည်းကျဆင်းသွားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဇသည်အကြင်နာမဲ့သောရုပ်သေးရုပ်များဖြစ်နိုင်သည်။
နည်းစနစ်သစ်တစ်ခုတဦးတည်းတက်သည်ကလော်ရင်းမေးလိုက်သည်စဉ်သိပ္ပံပညာရှင်များ, တဦးတည်းလိင်မိမိကိုယ်ကို satiates ဘယ်သူကိုအတူအိမ်ထောင်ဖက်၏တာယာဖို့စိတ်သဘောထားမခေါ် Coolidge Effect။ သူတို့ကအမျိုးသမီးအပါအဝင်နို့တိုက်သတ္တဝါများအကြားကျယ်ပြန့်ကဒီဖြစ်စဉ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ တချို့ကအမျိုးသမီးကြွက်ဥပမာ, displays- ဖိတ်ခေါ်ပိုမို-arching တွေအများကြီးပရောပကျွမ်းတဝင်မရှိသောမိတ်ဖက်နှင့်အတူ သူတို့စုစည်းထားပြီးပြီနှင့်အတူထက်။ ဤဖြစ်စဉ်နှင့်အညီစုံတွဲများကွာရှင်းပြတ်စဲမှုကြောင့်သူတို့၏လိင်ကိစ္စဘဝများထပ်တူပြုခြင်းမရှိတော့သောအခါယခင်ကစိတ်မ ၀ င်စားခဲ့သောဇနီးမောင်နှံသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအသစ်တစ်ခုသို့ ၀ င်လာသောအခါဒေါသကြီးသောလိင်စိတ်ကအလွန်တုန်လှုပ်သွားသည်။ ဤမိန်းမသည်ယခုသူ့ကိုရှာခြင်းငှါရှိ၏ နှစ်ဆယ်-တတိယခင်ပွန်း.
တောင်မှသူတို့အအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်မပါဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation ပြီးနောက် Coolidge Effect တွေ့ကြုံခံစား:
အလွန်အမင်းစျေးကြီးပြီးလက်တွေ့ကျသော“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအရုပ်များ” ရှိသောယောက်ျားလေးများအကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ခဲ့သည်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်မှာသူတို့တွင်ဆယ်ယောက်လောက်ရှိတယ်။ သူ့မှာများများစားစားရှိလို့သူ့အိမ်မှာအခန်းမရှိတော့ဘူး။ ဤအခဲ့ကြသည်သော်လည်း အရုပ်သူဟာသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့လုံလောက်တဲ့အချိန်တွေပေးခဲ့ပြီးသူတို့မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းအသစ်တွေအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့မိန်းကလေးငယ်များအဖြစ်စတင်ရှုမြင်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ ယောက်ျားတွေကဘာကြောင့်ဒီလောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစုဆောင်းရတာလဲ၊ ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးသောအပြာရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပြီထင်ပေမယ့်အကြိမ်အနည်းငယ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး။ ငါ့မှာစုဆောင်းထားတဲ့ jpeg ပုံရိပ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ငါဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုကိုစုဆောင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်သူတို့ကိုနောက်တဖန်ပြန်သွားမှတ်မိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အပိုင်းမှာပုံရိပ်အသစ်၊ ပုံရိပ်အသစ်သို့မဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအသစ်အရုပ်ဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဇီဝဗေဒဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်များကဲ့သို့ ပို. ပို. ကြည့်ဖို့ပုံမှန်မိတ်ဖက်ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုအသစ်တစ်ခုတဦးတည်းကြွယ်ဝတဲ့ချောကလက် mousse တူသလော သာ. ကြီးသောဗီဇမတူကွဲပြားမှုနှင့်အတူဒီတော့ပိုပြီးအမျိုးအနွယ် (ပျှမ်းမျှဖြတ်ပြီးလူဦးရေအပေါ်) ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့ဗီဇသူတို့သင်္ဘော clamber နိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစက်လှေပေါ်တွင်အနာဂတ်သို့ရွက်လွှင့်ဖို့ပိုနှစ်သက်။ မယားတစျခုတောငျးတှငျအားလုံးကြက်ဥချပြီးသကဲ့သို့အန္တရာယ်များသည်။
အထောက်အထားစေချင်သလား? အဘယ်သူမျှမ နို့တိုက်သတ္တဝါဖြစ်ခြင်း၏သဘော (monogamous များမှာ လိင်သီးသန့်) နှင့်သာသုံးရာခိုင်နှုန်းကိုတောင်တစ်စုံ Bond နှောငျ့ယှကျ။ (လူသားမြားသညျအပါအဝင်) ဤ pair တစုံ-bonding ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်အဖြစ်လူသိများကြသည် လူမှုရေးအရ monogamous။ သူတို့ဟာသူတို့နေဆဲအတွေ့အကြုံ Coolidge Effect ကျေးဇူးတင်န်းကျင်အရူးမှနျတိုကျတှနျးထားရင်တောင်အလွယ်တကူရေရှည် attachment များကိုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်မကြာခဏအတူတူသူတို့၏အမျိုးအနွယ်ကိုမြှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇသည်ကျွန်ုပ်တို့အား“ အစဉ်အမြဲပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခြင်း” ကိုစွန့်စားလျှင်ပင်အလားအလာရှိသောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေစေလိုသည်။ အိမ်ထောင်ဖက်များ ဆက်၍ သစ္စာရှိနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်းဤအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး“ ဟမ်ဘာဂါကူညီသူ” ၏အစေခံတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်တွေ့မြင်စေနိုင်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ သုတေသနပြုချက်အရအိမ်ထောင်ဖက်တွေဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့လေ့ရှိတယ် ပိုပြီးသူတို့လက်ထပ်ကြသည်ကြာကြာစိတ်ဆိုးစေ။ (Coolidge Effect သည်ပျားရည်ဆမ်းမှ neurochemistry ကိုချစ်သူများ၏ကန ဦး အရှိန်မြှင့်ရိုက်ချက်ကို ၀ တ်ဆင်ပြီးနောက် ပို၍ ထင်ရှားလာသည်။ ထို့ကြောင့်ချစ်သူများအလုံအလောက်မချစ်သောသူများနည်းတူ၎င်းတို့သည်ခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုမလွှဲမရှောင်သာယုံကြည်နိုင်သည်။ )
အချို့စုံတွဲများသည် dopamine ကိုညစ်ညမ်းစေ။ ညစ်ညမ်းသောလိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုသူတို့၏လက်တွဲဖော်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်မှန်ကန်သောစိတ်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းခြင်းအားဖြင့်ဤ sneaky primitive mode ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြသည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်သူတို့သည်မိတ်လိုက်ခြင်းအခွင့်အလမ်းအသစ်ရရှိသော ဦး နှောက်ကိုလှည့်စားရန်ကြိုးစားသည်။ အခြားသူများမူပြင်းထန်သောခံစားချက်များ (နှောင်ကြိုးကဲ့သို့) သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်များအားလဲလှယ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ dopamine ကိုမြှင့်တင်ကြသည်။ သို့သော်သင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုလုပ်လိုသောအခါတိုင်း dopamine surge ကိုကြိုးကိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ မိတ်ဖက်တစ် ဦး သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကို“ ပြုပြင်ရန်” လိုလားပြီးနောက်တစ်ခုသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရရန်ဤမျှအားစိုက်ထုတ်ရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးလျှင်သို့မဟုတ်အဆိုပြုထားသည့်အန္တရာယ်ကိုဖြေရှင်းရန်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဇီဝဗေဒအားကျွန်ုပ်တို့ကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေရန်ခွင့်ပြုမည်လော။ အနာဂတ်ပို့စ်များတွင်သမိုင်းတစ်လျှောက်ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးအသုံးပြုခဲ့သည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုလေ့လာလိမ့်မည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းသည်အလေ့အကျင့်ကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းသည် Coolidge Effect ကိုမကြာခဏမြန်ဆန်စေပြီး၊ dopamine များပြားလာခြင်းနှင့်လိင်စိတ်အကျိူးဆက်အရသဘာဝအရပေါ်ပေါက်လာသော dopamine နိမ့်ကျသောအချိန်ကာလများကိုတန်ပြန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားထပ်ခါတလဲလဲရှာဖွေခြင်းများပြုလုပ်သည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဓာတ်မကျစေအောင်တားဆီးပေးတယ်။
dopamine အဆင့်များသည်ပြင်းထန်သောအမြင့်နှင့်အနိမ့်အမြင့်များနှင့်မပတ်သတ်ပါက ပို၍ သိမ်မွေ့သောအပျော်အပါးများသည်မှတ်မိနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်မှတ်မိနိုင်ပြီးမိတ်ဖက်များကသူတို့၏အရောင်တောက်ပမှုကိုထိန်းသိမ်းထားလေ့ရှိသည်။ Coolidge Effect ကမင်းရဲ့သမဂ္ဂထဲကို ၀ င်လာရင်မထိတ်လန့်ပါနဲ့။ သင်မစဉ်းစားထားသောရွေးချယ်စရာများရှိနိုင်သည်။